Pearl Press Media, Harare (2021)
Home > Zimbabwe > Harare > Book Stores > Pearl Press Media
Pearl Press Media is where you find quality Digital Printing, Graphic Design, and Advertising services. Pearl Press Media is an independent Media house which offers a wide range of services from book publishing, printing, graphic designing, advertising and other related services.
We are widely known in Zimbabwe (where we are based) and other countries in Southern Africa as an independent Publishing company for independent authors. Pearl Press Media is becoming a favourable company for authors especially self-Publishing authors who are looking for a company that provides high quality professional book publishing services.
We're very glad to be part of the team that worked on the design of this album art project for Munyaradzi Soka Welarynx. The song is coming out very very soon.
Ichi ndechemashefu ega ega ichi👐👐
Of the 2 songs that we're releasing next month, ladies and gentlemen, this is #Hande_KuChurch for you
Dzakuda kutopera nyaya dzacho
Some Pearl Press Media book designs. This is Gango for you ladies and Gentleman.
Ko Zhanje chaakanga atumirwa nhume yamambo ingava nyaya yei? Mambo vainyanyodei kumukomana uyu? Kuti munzwe kutapira kwerungano urwu muzvitsauko zviri mberi batai munyori wedu panumber dzinoti 0717 834 434 kana kuti 0784 429 359
Mbiri yaZhanje yekurwisana negarwe kusvika pakuriuraya yakatekeshera matunhu ose emunyika yashe Rukamabaire nekumativi mana ose enyika. Munharaunda yaaigara nematunhu akapoteredzana hapana akange asisamuzivi. Akange ozivikanwa nevanhu vose kubva kuvadiki kusvika kuharahwa nechembere. Mushure mekunge vanzwa nezvemujaya akange aratidza hushingi nehumhare pakurwisana nechikara chemumvura, Mambo Rukambaire vakatuma nhume kumusha kwana Zhanje kuti auye kumuzinda kwamambo. Nhume iyi yakasvika pamusha paVaGotora ruri rungwananingwanani uri musi wesvondo. Yakasvikowana VaGotora vari padare pavo vachipfura zvavo simbi dzavo. Imbwa dzaZhanje mbiri Mahuyanikwa naHukudzambwa dzakatanga kuhukura mushure mekunge dzanzwa izwi remunhu aishevedzera ari nechekure kwemusha. ''Tisvikewo pano mhanduwe! Gogogoi vashe vangu,'' Bonderai uyo aive nhume yakange yabva kuna mambo akashevedzera nezwi gobvu raka shoshomera. Akaita seari kurova bembera akamira padurunhuru. VaGotora vakamboiti zii vachida kunyatsoteerera kuti munhu ainge achishevedzera nechekunze kwemisha aiti chii chaizvo? Bonderai akange angosvika chimhukutira, neizvozvo varidzi vemusha vakange vaitwa zvekufutwa. VaGotora vakazoshevedzera kuna Zhanje kuti abate imbwa dzake kuitira kuti dzipe mukana muyenzi ainge achisvika mumusha Zhanje akabuda mugota make achiita zvekuzvuva makumbo, meso ake akange achiri akaputirwa nemazikope eguti. Akapukuta pukuta maziso ake kuti adzinge hope kumeso kwake. Akaridza mheterwa kamwechete imbwa dzake mahuyanikwa naHukudzambwa ndokubva dzapeta miswe chiriporipo. Dzakakotamisa huso hwadzo ndobva dzanorara mugudzururu mehozi. ''Svika zvako muchinda. Kunze kwachena," akashevedera Zhanje achitaura naBonderai kuti asvike pamusha. Akabva adzokera mugota make kunokandazve matama pasi kuti apedzise hope dzake dzakange dzagurirwa panzira paakange ashevedzwa nababa vake kuti adzinge imbwa dzake dzakange dzichihukura muyenzi. Asika papi pacho paange achadzokera akabatwazve nehope iye akange atombomuka kare uye kunze kwakange kwachena? Uku kwakange kwangove kuita kweashaya, kutsvaga uta nemugate. Bonderai akapinda mumusha maVa Gotora zvinyoronyoro ndokubva angonanga kudare kwaive nasamusha. Akasvika padare ndokunzi agare pachidanda chaivepo. Vaviri vakakwazisana mushure mezvo Bonderai akazivisa kuna vaGotora kuti aive ani, aibvepi uye akange afambirei. ''Vakuru vangu ini ndinoitwa Bonderai, ndiri nhume yabva kwamambo Rukambaire,'' akadaro Bonderai. ''Heya nhai? Kwakanaka here mambo kwava kutuma kuno muchinda?" Vakabvunza VaGotora. ''Hongu kutsvene baba. Hakuna kana chimwe chete chakaipa zvacho. Ose machena." “Hooo nhai? Zvanzi chiiko namambo?'' Vakabvunza VaGotora. Bonderai akambotura befu ndokuzoenderera zvake mberi achitaura. ''Mambo vari kuda kuti jaya renyu Zhanje risvike kumuzinda. Pane matama maviri matatu avari kuda kukurukura naye.” "Zvakanaka muchinda,Zhanje ndiyeye anga akamira paGota pake apo anga achikutandira imbwa.Rega ndimuzivise kuti uri muyenzi wake."Vakadaro VaGotora vachisimuka vakananga kuimba yaZhanje yekurara.
Hapana kupera makore maviri kubva musi waitirwa Zhanje bira rehuhombarume hwake apo vasekuru vake VaGunguwo vakabva vashaya. Sezvo makore avo okuberekwa akange afamba,ruzhinji rwevanhu haruna kukanuka nerufu rwaVaGunguwo. Havana kumbopedza mwaka yakawanda vakarara panhowo vachirwara . Kwakange kwava kusakara kwaro dowo serisakambodyiwa nyama. Vakangoita svondo mbiri vachiti musoro musoro. Pasvondo retatu vakange vasungwa shaya vasisataure. Divi ravo rese reruboshwe kubva kumusoro kusvika kumakumbo rakange raoma mitezo. Havana kuzomboita mazuva ndiye ramabika sarai mudye. Zhanje akange ave nemakore gumi nemana pakashaya sekuru vake. Panguva iyoyo akange atove hombarume yakakwana kuburikidza nemhuka dzaaiuya nadzo kubva kwavainovhima nevamwe vakomana vezera rake. Paakazorwisana negarwe akariuraya murwizi Munwahuku ave nemakore gumi nemanomwe ekuberekwa,Zhanje akange otopinda mumasango aiyera pamwechete nevamwe vavhimi vakange vatove anasaimba kare. Aiti pose paainodzoka kubva kunovhima aibva akaremerwa nenyama yemhuka. Achisvika pamusha, amai vake VaMatirozva vaimutambira vachidzana nekupururudza vachidetamba vachiti; Maita mwoyo! Titambire vahombarume Titambire baba Mwoyo yangu yiyi Maita vadyegora vadye mangava Mangwana rinokudyawo Maita vari Shangure Varere Muzarabani Vari Dzimbahwe Vene venyika Varozvi vakapera nendaa Maita vari Dombotombo Maita vahombarume,vadzimba Mwoyo yangu yiyi. Ngazvirambe zvakadaro namangwana! Maita moyo yangu yiyi Vahombarume Vachengeti vemhuri Maita baba! Paainge achidetemberwa kudai, Zhanje aibva amera mapapiro, ndiye zenze tuku obva aita manyawi. Aibva anyemwerera mwoyo wake wobva wazara nemufaro mukuru. Izvi zvaibva zvamupa shungu nesimba rekuda kuita zvakapfuura zvaaive aita. Zhanje aiti kana ovhima aiita semunhu asvikirwa. Ko zvaigozivikanwa nani? Pamwe aitosvikirwa. Pane mazwi aaitaura paaive achivhima. Wainzwa oti; "Mwana waGotora! Ndoita chapa chapa ini! Zha, zhu, zhi Yave nyama yekugocha!'' Ipapo mhuka dzaiita murakatira dzichidonha pasi. Panenge pabatwa basa. Ana hombarume vanenge vaita zvinorova. Pakukura kwake achiyaruka Zhanje akange ashamwaridzana nevakomana vatatu vezera rake vaiti Tamanikwa, Pariwa naTichaenda. Kunyangwe vakomana ava vaitamba pamwe nekuita mabasa akasiyana siyana vari vese, Zhanje aiwanzofarira kutamba naPariwa, ndiye aive shamwari yake yepamwoyo. Pariwa naZhanje vakange vasina kunyanya kusiyana pakuzvarwa kwavo. Vaive vazvarwa gore rimwe chete asi Pariwa aive mudiki kuna Zhanje nemwedzi miviri chete. Kwaizotiwo uyu Tamanikwa ndiye aive mukuru kwavari vose. Aive mukuru kuna Zhanje naPariwa negore rese. Kuna Tichaenda Tamanikwa aive mukuru nemakore maviri. Tamanikwa naTichaenda vaive mukoma nemunini'na, buda ndibudewo, baba vamwe chete amai vamwechete. Vakomana ava vaiwanzoti zvavo kana vasiri kuvhima musango kana kuraura hove vaifarira kutamba mitambo yakasiyana siyana vachizvivaraidza zvavo. Mitambo yaiwanzotambwa nevakomana ava yaisanganisira horikotyo, hwishu nekutuhwina munzizi. Muchirimo ndomavaita chihwandehwande, chisweru pamwe nekuridza ngoma, kuimba nekutamba papfonda. Misha yanaZhanje neyanaPariwa yaive yakabatana. Vaive vari vavakidzani. Mumwe musi Zhanje akati apedza kudya kwemasikati, akafunga kuenda kumba kweshamwari yake Pariwa kuti vapinde musango vambonotanha michero. Akati achingoti vhu kusvika pachivanze panaPariwa, Zhanje akasvika shamwari yake ichikwatisa kakari kadiki kaive nehurimbo hwekuzoteyesa shiri. Amai vaPariwa vaive mubishi rekusuka mudziyo yavo yavakange vabikira kudya kwavo kwavaive vadya masikati iwayo. Uyuwo Ndarukwa chinini'na chaPariwa chaive nemakore masere ekuberekwa, chaive chichiseredzera zvacho chiri mumba yekubikira. Chakange chaguta zvacho sadza rezviyo nerupiza. Chikomana chakati zvacho gumbo uko rimwe uko ndokurara zvacho nemanhede. Chakatanga kuridza dumbu racho raiita kunge chimimbamutashu ndokuridandaura zvacho saTagutapadare. Chakatanga zvacho kuimba chikomana chakarara nemanhede kudaro; "Uku ndokunonzi kuguta uku, Uku kauku! Chigutiro kutamba wakaguta! Chigutiro kutamba wakaguta Hukamaiko, Hunenge husahwira Chigutiro, Tamba wakaguta Ndokunonzi kuguta uku! Ukuka uku!" Ichokwadi kuti mwana wehuku anoguta ndiye aripo. Kana iri nherera inotoguta chete musi wafa amai vayo "Masikati amai,’ akadaro zvake Zhanje achikwazisa amai vaPariwa. ''Masikati mwanangu Zhanje, waswera sei?'' "Ndaswera zvangu maswerawo amai?'' ''Ndaswera zvangu mwanangu, vaswera sei anaamai nababa kumba?'' vakabvunza amai vaPariwa vachikwesha hadyana yavo nedota kuti vazoidira mvura kuti ichene. ''Vamboswera zvavo. Aripo here Pariwa pano amai?'' akabvunza zhanje sezvo akange asati aona kuti mumwe wake aivepi ''Hongu aripo mumwe wako mwanangu. Ariko kudare kwavo uko kwaari kubika hurimbo hwake," vakapindura VaMandinema amai vaPariwa. ''Zvakanakai amai, regai ndisvike padare ipapo ndimuone,'' Akadaro Zhanje atonanga nzira yaienda padare revarume remusha wana Pariwa. Musha wega wega waive nevanhurume nevanakomana waive nedare rawo. Padare apa ndipo paiitwa chipi nechipi zvacho chaitwa nemwanakomana wese kana munhurume wese chaive nechekuita netsika nemagariro avo. Padare ndipo paikangirwa mhandire nevakomana. Ndipowo pavaikangira nzungu dzemutetenerwa dzekuti vazodya zvavo vakatandara. Ndipowozve paigochwa zvimwe zvose zvaigocheka kana zhizha rave kudyiwa Vanhurume nevakomana kana dzave nguva dzekudya ndipo pavaidyira sadza ravo remasikati neremanheru. Ndipowozve paidzidziswa vakomana nezvehupenyu hwavo kubudikidza nengano dzavaiudzwa ipapo vachitandara uyewo nekurayirwa netsumo nemadimikira. Kana pamusha apa paine mhare dzaive nehumhizha hwekuveza miti kana kupfura simbi, padare ndipowo pavaibatira basa ravo ipapo. Ndiko kusaka Zhanje akasvikowana shamwari yake Pariwa ari padare. Pariwa aive hombarume saZhanje naizvozvo akasvikirwa neshamwari yake ari mubishi nekugadzira hurimbo hwake hwaaida kuzoteyesa shiri. Pariwa akabura kahari kaive nehurimbo ndokukatsveta kwakadaro uko kuti kapore. Vakomana vakakwazisana uyuwo Pariwa ndokubva ashevedzera kuna amai vake kuti vaida kumbopinda musango kunotanha muchero sezvo iye neshamwari yake vakange vagara vazvironga kare. Zvikomana zviviri izvi zvakapoterera nekuseri kwedumba ndokupfuura nekumatanga emombe neembudzi. Hezvo zvorurama zvakananga nekujiri remazhanje raive mugomo raive pedyo nemisha yavo nechedivi rekuchamhembe. Vachingoti kwede kupinda mujiri iri, vakatambirwa netsoko nemakudo aitoita zvawo dambe achidya mazhanje pamadiro Vakomana vaviri ava havana kuda kuita mapitse nezvipuka izvi. Vakangozvisiya zvakadaro. Ivo vakanonga nonga mazhanje avaida mamwe ndokupakira mutunhava twavo mamwe ndoaiperera pamuromo. Vakazofuratira jiri iri vananga nechemberi kwaro kwaive nechisango chaiveko. Zvichakadaro ambuya Muchaenda kachemberebande nekazukurusikana kavo Maonei vaingonotsvaka zvavo huni muchisango ichi. Vaiti vakamboti fambe fambe vachiunganidza huni kudziita zvisvinga zviviri, vombotura befu vakagara pasi vachizorora. Havo vese munzira vachinzunzutira musangomo sezvo musango umu makange muine muchero yakasiyana siyana. VaMuchaenda naMaoneyi vaimbopota vachidzora mwoyo netsvanzva ne mazhanje zvakange zvakachiti tekeshere nesango rese. Maonei akasvika pane Munhengeni waive nenhengeni dzakatsvuka kuti piriviri akatanga kutanha muchero iye achiita zvekupotsera mukanwa make. Dzakambotanga dzichaita munakira kure mvura yemubvumbi. Kuri kuvavira ikoko. Asi gare gare akasvipira dzimwe nhengeni pasi ndokubva ashevedzera kuna ambuya vake achiiti, ''Yowe ambuya ndadya nhengeni dzakaora. Yuwi- kushata kwadziri kuita!” Ambuya vake vakangomutarisa neziso raiti, ''Chibva wanyarara muromo wako iwoyo! Handina kumbokuudza here kuti musango hamutaurwe mashoko akaipa iwayo?'' Maonei akabva asona, muromo wake oenderera mberi nekuunganidza huni. Vati fambe fambe vakasvika paive namatombo makuru. Vakaona kuti pamatombo apa paive pakazara nemakudo aitambirapo. Makudo aya aitamba achitandanisana achirovana. Matambiro akadai akanakidza Maonei zvekuti akatadza kuzvibata kana kuzvidzora Akangoerekana ati pwati kuseka, wanike ogegedzera sango rese. VaMuchaenda vakaviruka nehasha. Vakada kusvetukira muzukuru wavo kuti vamubate muromo kuti asangoseka zviitiko zvesango, Vasati vambodii nekudii kwese hameno kuti chaunga chenyuchi chakabva nepi. Chakange chiine hukasha ndokusvikomomotera pana VaMuchaenda nemuzukuru wavo. Vaviri vakarumwa zvisina ani ati akaona. Vakamboedza kuda kutiza vachipumha pumha iyo mhere yakwetsurwa asi zvakashaya basa. Vose vakawira pasi idzo nyuchi navo momomo. Chakava chisionekwi mbare yegotsi.Nyuchi dzakavaruma kusvika vachiti tasa. Vakati pfuru pfuru muvhu, tindinywa, zii ndiye sarai. Padzakapedza kuruma vaviri ava kusvika vafa, nyuchi hadzina kuonekwa kuti dzafamba sei. Ndiyowo nguva yakabva yaroverera Zhanje naPariwa kusvika pakange pabva kuitika chiitiko chaiomesa mate mukanwa ichi. Vakomana vaviri ava pavakaona kuti VaMuchaenda nemuzukuru wavo vakange vatotonhora kare havana kuzombopedza nguva. Vakabva vamhanya kumusha kunomhangara zvavakang e vaona musango kuvakuru. Nenguva isipi vanhu vakange vatoungana voronga kuti zvitunha zviviri izvi zvaambuya nemuzukuru wavo zvingaendeswa sei kumusha kuti zvinochengetedzwa.
Pamazuva akatevera VaGotora vakaraira vadzimai vavo VaMatirozva kuti vaburitse zviyo. Mushure mekuburitswa kwezviyo zvakabva zvanyikwa Zvanyikwa kudaro zvakazoyanikwa kuti zviome uye kuti zvimere. Vakanokoka madzisahwira avo maviri aiti VaChisutumwe naVaMandinema kuti vavabatsire kubika hwahwa. Nezuva retatu hwahwa hwakabva hwaparurwa. Hwakaita machavo maviri huchitsva pamazitanda emoto.Hwapiswa kudaro, hwakabva hwadirwa nezuva rechishanu. Pakazonosvika zuva rechitanhatu, machembere matatu aya akange atove mushishi rekuhusvina. Hwasvinwa kudaro hwakambonzi hurare husiku humwechete mumakate ahwo huchishinyira nekupupa furo hurimo. Muhozi mahwakachengeterwa makanzi hamuna anopindamo kunze kwechembere nhatu dzakange dzahukanga hwematanda hwemazuva manonwe. Pakapera svondo iroro shoko rakange ratofamba mumisha yakapoteredzana kuti kwaive nebira. Vanhu vaizorara nemusi weMugovera wacho. vachinwa nekuridza ngoma nembira. Vaizoimba nekutamba husiku hwese. Vaizoswera svondo yacho vachienderera mberi nemutambo kusvika kwasviba kuitira vanagararirimo navanaMusiyadzasukwa Kujekerere revanhu, VaGotora vakange vasina kunyatsobuda pachena kuti bira iri raive rei. Vakange vangoti waive mutambo wekupembera nekutenda vadzimu vavo nekuvakokomborera nehupenyu nehutano nekuvapa gohwo rakanaka pazvirimwa zvavo zvavakange varima mwaka wakange wapfuura. Zvino vanaMusiyadzasukwa ndipo pavanodanwa vakadavira ipapo. Waivanzwa anaTumbare navanaTagutapadare vachikokerana nemuridzo nemheterwa. ''KwaGotora hanzi kwaita doro! Hanzi kwaita hwahwa!'' Vaibva varutsenhura rwekudhakwa. “Ndati kwaGotora kwaita hwaaahwa!” ''Handei tinohukebeda, tinohushapira, tigohumedza! Kudya zviyo isu vana vehurudza!'' Nemusi wacho vanhu vakazosara zvavo voswera vachidy sadza nenyama yembudzi vachihushapira hwakange hwakang nechembere nhatu. VaGotora naVaGunguwo naZhanje, vakange vatopedza chivanhu chavo kare apo vanhu vakazosara vachipfichuka zvavo nekurasa miswe. Vemhuri iyi vakangotorana pahuna hwavo hwaiti ivo VaGotora, baba vavo VaGunguwo, Zhanje naamai vake VaMatirozva. Vakanopinda mumba yaisapindwa neruzhinji. Vakaita chiverevere pavakaona kuti ruzhinji rwechita chevanhu chakange chiripo rwakange rwagarwa matunduru mutsinga nemuhuropi naihwo hwematanda. VaGunguwo vaive nekasha yavo yefodya yebute. Zhanje akapinda akabata mbiya diki yemuti. VaMatirozva ndivo vaive nekapfuko kadiki kaive nehwahwa. Vapinda mumba iyi vakavhara musuwo. Varume vakasviko chonjomara vari vatatu. Mudzimai mumwechete ndokusvikopfugama. Zhanje akarairwa kuti aise mbiya yake pasi. VaMatirozva ndokusvikogadzika pfuko yavo yehwahwa padivi. VaGunguwo vakagumha gumha tufodya kubva mukasha yavo vachigumhira muruoko rwavo rweruboshwe. Vakatswinya tufodya neminwe yavo miviri yekutanga ndokuipakira mumhino dzavo vachiita zvekukweva. Vakatanga kuombera nemaoko maviri. Vamwe vose vaive mumba umu ndokutsinhira. VaGunguwo vakasuma kuna baba vavo VaChivhiya vakanga vatungamira kare vaenda mbire. Vakati vasvitse kuna baba vavo VaGarati vaive vasekuru vaivo VaGunguwo. VaGarati vaizosvitsawo kuna baba vavo vaive tateguru waVaGunguwo kuti vasvitse mberi kune vamwewo vavaisaziva. Voudzana udzana kumusoro ikoko kusvika zvasvika kuna Musikavanhu. Chidzivachepo. Chibwechitedza. Nyadenga. VaGunguwo vaiita izvi vachitaurira kuvadzimu vavo vachivaudza kuti basa ravaive naro musi uyu raive rekukumikidza mashavi emuzukuru wavo Zhanje ekuti akomborerwe ashingiswe akundiswe mukuvhima kwake. Bu,bu, bu! Vakatanga nekuombera,ndokuzoti, "Vayera mwoyo, vadyegora Varozvi vakapera nendaa! Chiri mumusakasaka chinozvinzwira! Ndinotanga nemi baba vangu Vachivhiya nyakutumbura, Ndini Nevanji wenyu Gunguwo Mhuri yangu ndiyoyi Iri pano iyi. Tati tikusumei, Tisvitse kwamuri gono Bira ratiinaro pano Chivara Uri mutambo wekupembedza Kukumikidza,kuchenura Nekusimbisa Pamwe nekutsigisa Mashave ehuhombarume Ari pamhwere yenyu Zhanje. Mupeiwo hugamba,humhare nehushingi Pakushava kwake. Agotivhimirawo isusu, Dzakakora,nzombe dzine nguwo. Agoriritira nekushavira mhuri yake, Honaiisu vamwe Tangove hari dzofanzirofa. Tinoda kudya tichiguta, Tateterera mwoyo yangu yiyi. Motisvitsirawo kuna baba venyu VaGarati, Vosvitawo kuna baba vavo VaMaguranyanga, Vosvitsawo mberi kwatisingazive. Handingaite dunga munhuka, Dzamara zvasvika kuna Musikavanhu, Chidzivachepo, Chibwechitedza!" Bu,bu,bu Mhururu yakaridzwa. Zhanje akange akapakatiswa zvombo zvake nguva yese apo vasekuru vake pavakange vachipira kuvadzimu vavo. Pedzezvo akanzi atsvete zvombo zviye pasi kuitira kuti agadzirire chikamu chaitevera. Zhanje akarayirwa kuti apfugame pasi nemabvi pamwe nemagokora. Aita saizvozvo vasekuru vake vakamutemera nyora pamakumbo ake kusanganisa pamusoro petsoka, pamupimbira nepazvidya. Vakamutemerazve pamapendekete ake pachipfuva, pamhanza nepamusoro pezvanza zvemaoko ake. Vapedza kudaro vakadira doro pasi katatu. Maoko akarovaniswa, mhururu ndokuridzwa, mheterwa ndokutsviriridzwa. VaGunguwo vakazopedzisira nekuburitsa nhekwe yavo yefodya yaive yakagadzirwa nenyanga yehondohwe yehwai. Vakaguma guma fodya vachigumira muchanza chavo cheruboshe imwe ndokuputa imwe ndokukanda pasi. Vakatarisa pfuko yaive nehwahwa ndokuiti piku. Vakaikakata kusvika hwasara pakati nepakati pepfuko. Vakatambidza pfuko kuna VaGotora avo vakahukakata kusvika hwati hwaa kupera. VaMatirova vakapururudza varume ndokuombera.VaGunguwo vakasimuka ndokubuda panze vachiombera. Vakateverwa naVaGotora naVaMatirozva naZhanje vakatungamidzana kudaro.
Pearl Press Media is an independent Media house which offers a wide range of services from printing, graphic designing and advertising services.
Graphic Designing, Printing, Book Cover Designs, Typesetting/ Formatting, Distribution, Marketing
+263 775 101 750